कहाँ पुग्यो वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट लोन ल्याउने प्रक्रिया ? — News of The World
कहाँ पुग्यो वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट लोन ल्याउने प्रक्रिया ?
१ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले नितिगत शंसोधन गरि विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था जारी गरेपछि वाणिज्य कैंकहरुले विदेशबाट ऋण भित्राउने प्रक्रिया अघि बढाएा छन् ।
यति बेला केहि बैंकले विदेशबाट ऋणका लागि सहमति गरिसकेका छन् । एनआइसी एसिया र एनएमबि बैंकले ऋणका लागि आइएफसी (इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन) सँग सम्झौता गरिसकेका छन् । एनएमबी बैंकले आईएफसीसँग डेढ अर्ब लोन ल्याउने सम्झौता गरिसकेको छ ।
आइएफसी विश्व बैंक समुहअन्तर्गत पर्दछ । नेपालसहित १ सय बढी देशहरुमा आइएफसीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले यी दुई बैंकहरुले ऋण ल््याउनका लागि ऋणदातासँग सहमति गरेको जानकारी दिए ।
बैंकहरुले ऋण ल्याउन थालेपछि अशिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या केहि हद सम्म भएपनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने छन् ।
‘लाइबर दरमा ३ प्रतिशत बढी व्याजदर नपर्नेगरी आइएफसीसँग सहमति गरेर बैंकहरुले वित्तिय लोन भित्राउन लागेका हुन् ।
हाल ६ महिनाको लाइबर दर २ दशमलव ४७ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो ऋणको व्याजदर करिब साढे ५ प्रतिशतको आसपासमा पर्दछ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
५ वर्षे अवधिसम्मका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था छ। वैदेशिक ऋणबाट स्वदेशमा थप पुँजी सिर्जना हुने र यसले विकासको गतिलाई टेवा दिने बैंकरहरुले बताउदै आएका छन् । तर नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले भने अहिलेको रकम त्यति ठूलो नभएको बताएको छ । हालको ऋण रकमको परिचालन र त्यसको उपलव्धी हेरेर आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यो रकमको सीमा बढाउन एशोसिएसनले आग्रह गर्ने बताएको छ ।
बैंकहरुले ल्याएको ऋण रकम जथाभावी परिचालन गर्न भने पाइने छैन। जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका साथै पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्ने छन् ।
यस साता एक अर्ब ६३ करोडको शेयर कारोवार
शेयर बजारमा सुधारको सङ्केत, कसले कमाए अनि कसले गुमाए त ?
कैलाश विकास बैंकले १७ प्रतिशत लाभांश दिने